टार्गेट किमाथांका- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
पुस १२, २०७६ सरला गौतम
हिले बजारको एउटा घरको पिँढीमा थिएँ  । सँगै बसेका एक युवकले हावामा हात फालेर भने, ‘आम्बो खाँदबारीको मान्छे त रुद्राक्षको बोटैमुनि सुत्छ रे त, चोर ढुकेर  ।
चोरले त फूल देखेरै चिन्छ रे गेडाको क्वालिटी ।’ आडैमा बसेका युवकका बाबुले अगाडिको बाटो देखाउँदै भने, ‘आबो यो बाटो चाइनासम्मै पुग्नु आँटेको छ । त्यताको मान्छे त मालामाल होला ।’ मेरो मनले भन्यो, ‘आम्बो यो बाटो पछ्याउँदै चाइना पुग्न पाए !’
धूलाम्मे सडकको सप्पै धूलो ज्यानमा बोकेर म पुगें खाँदबारी, भोलिपल्टै । बजारमा डुलिहिँड्न थालेँ । चाइना छुने बाटो बन्दै गरेको बजारका मान्छेमा खाँदिएको थियो उत्साह । ‘संघीयताको कारण सदरमुकामको रौनक मुर्झायो,’ व्यापारीहरूले विरह पोखे । ‘यो बाटोले जब चाइना छुन्छ तब हेरौंला,’ उनीहरूको ताक अब अलि पर थियो ।
साँझपख म देवकोटा चोकमा पुगें । ५२ वर्षे कोपिला थुलुंगको अल्लो पसलमा । मानिसहरूले लुगा लगाउने सुरुआत नै अल्लोबाट भएको भन्ने जानकारी दिइन् कोपिलाले । उनको पूरै परिवारले कपडा बुन्यो । आफ्नो गाउँलाई पुर्‍यायो । अब उनले बुनेका कपडा देश–विदेश पुगेका छन् । ‘कोसी ल्हासा राजमार्ग,’ मेरो वाक्य नसकिँदै उनका आँखा नाचे । भनिन्, ‘चाइनाको सामान हाम्रो बजारमा छ्यापछ्याप पारेको छ । हाम्रो सामान पनि त्यसैगरी उनीहरूको बजारमा छ्यापछ्याप्ती पार्न पाए !’ आहा उनको कल्पना !
हिलेसम्म मात्रै मोटरबाटो हुँदा पनि खाँदबारीको व्यापार चकाचक थियो । वरिपरि सप्पै गाउँका मान्छे झोलीतुम्बा भिरेर, सामलतिमल जोहो गरी बजार गर्न आउँथे । साता–पन्ध्र दिनसम्मै बजार गरिहिँड्थे । यहाँका व्यापारीले आइडिया लगाए— तुम्लिङटारदेखि मानेभञ्ज्याङसम्मको बाटो त सीधै छ, यसलाई किन प्रयोग नगर्ने ! लोकल सडकको कल्पना उभियो । श्रमदानमा खटिए गाउँले । बाटो बन्यो । भरिया लगाएर हिलेबाट मिनिबस बोकाएर ल्याए । हेलिकप्टरबाट जिप झारे । तुम्लिङटारमा सामूहिक गोदाम राखे । प्याँ–प्याँ पुँ–पुँ गर्दै ठूल्ठूलो स्वरमा दुइटा मोटर दौडन थाले । दिनकै रमिता भयो । मानिसहरू झ्यालझ्यालबाट निस्केर मोटर हेर्न थाले । मालसामानका लागि लोकल ढुवानी गजब भइहाल्यो । उद्योग वाणिज्य संघ खाँदबारीका अध्यक्ष युवराज शाक्यल,े साउन्ड इफेक्टसहित मोटर महात्म्य सुनाएका थिए दिउँसो ।
चाइनातिर दाउ साँचेर बसेका व्यापारीहरूसँगको कुराकानी बिट मारेँ यत्तिमै । भोलिपल्ट म लागेँ बाटो । जिपको अघिल्लो सिटमा बसेर । हेर्दैहेर्दै झुलेका धानका बाला । खुलेको आकाश । भरेर पेट तातोतातो थुक्पाले । खाँदबारीबाट नुम गाउँसम्म ठीकैको थियो कच्ची बाटो । त्यसपछि त खेलाइहाल्यो पिङ । जिपका पांग्रासँग जोरी खोज्न आउने बडेमानको ढुंगाको के कुरा ! साँझमा नेता भीरमा पुग्यौं । मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष यही भीरमा खसेर बितेका हुन् । जिप त थालजस्तो भएको थियो रे ! त्यसपछि भीरको नामै नेता भीर ।
गाउँको शिरमा सुस्ताउँदै किमाथांकालीहरु
एकै छिनअघि नुम गाउँमा जिप रोकिएको थियो । गाउँपालिका भवन छिरेकी थिएँ । भवन भव्य थियो । कर्मचारी एकै थिए । अध्यक्ष बितेकाले चुनाव हुँदै थियो । कुराकानीकै क्रममा गाउँपालिका कर्मचारी विपिन पराजुलीले बताएका थिए, बन्दै गरेको कोसी ल्हासा राजमार्गले बटुल्दै गरेको उत्साह । जिपमा अरुण तेस्रोका कर्मचारी र स्थानीय शिक्षकहरू थिए सहयात्री । दुर्घटनाको कथा कसैले सुनायो । नेता खसेको ठाउँ अर्कोले देखायो । चालक रिदार भोटेले भने, ‘भो म त हेर्दिनँ । मुटु काँप्छ । दिनकै कुदाउनुपर्छ यस्तो हेरे त कामै गर्न सकिन्न ।’ मैले पनि हेरिनँ मान्छे खसेको ठाउँ । रिदारको अनुहार हेरें । अहो भीरका जादुगर ! आयो अरुण तेस्रोको ड्याम साइड । बग्दै गरेको अरुणले सम्भावनाको सप्पै उज्यालो आफैँभित्र समेटेर बगेजस्तो लाग्यो । हेर्न पनि आँट चाहिने बाटोमा हाँकेर चालकले गोला पुर्‍याए । उनी राति नै कुइरेको टोली लिएर फर्कंदै थिए । त्यो बाटोमा नाइट यात्रा ! म तर्सेर केही हुनेवाला थिएन । यता यस्तै त हो नि हो !
गोला किन भनेको होला यो ठाउँलाई ? मैले एक शिक्षकलाई सोधेँ । गोला गोलामा नेपाली लडाकु जम्मा भएर बस्थे रे उबेला, भोटसँगको लडाइँमा । त्यसैले गोला भएछ, ठाउँको नाम । गोला पार गरेपछि टुप्लुक्क साँझमा पुगियो वरुण । फोटो हेरेर लोभिएको ठाउँमा म फुत्त छिरें । वरुण सुसायो । सुस्केरा हरायो ।
भोलिपल्ट बरुण उपत्यकाको सेरोफेरो छिचोल्दै बाटो लाग्यौं । बाटैमा भेटिएका थेन्डुक भोटे र वाङ्जा भोटे । दुई युवा मेरा सहयात्री बने । खोलाको खोंच हुँदै लस्करै हिँडेका मान्छे भेटिन्थे । स्थानीय र केही कर्मचारीबाहेक यो ठाउँमा अरू मानिस देख्न मुस्किल थियो । भ्रमण वर्षको तामझामको बाछिटासम्म देखिएन । बाटैमा भेटिएकी थिई, १९ वर्षे तन्नेरी वर्षा भोटे । स्कुल बिदा भएको बेला चाइनासम्म काम गर्न जाँदिरहिछ । पैसा बटुल्यो अनि देश फर्कियो । भोलि बाटो बन्ला र चाइनाको छेउछाउमा मज्जैको होटल चलाम्ला भन्ने उसको दाउ थियो । सँगै हिँडिरहेको थेन्डुकले रेला हान्यो, ‘साहुनी मुसुक्क पैसा भुसुक्क ।’ हाँसो रन्कियो । बडेमानको स्पिकर बोकेको थियो थेन्डुकले । एकै बिसौनी नछोडी हामी नाँच्यौं । सबैको एकै थियो ‘फिलोसोफि’– मरेको भोलिपल्ट दुई दिन । झमक्कै साँझ पर्‍यो । चिप्लो अप्ठेरो उकालो आयो । बर्षाले मेरो हात च्याप्प समाई । समाएरै गाउँ पुर्‍याई । म उसले नदेख्ने गरी भावुक भएँ । भोटेको छोरीले मायाले समाई मेरो हात । यसै भनें मनमनै ।
झिलिमिली हुंगुंङ गाउँ देखियो । कादुरी भन्ने संस्थाले झलमल पारिदिएको रे । मलाई उनीहरूले एउटा होटलमा पुर्‍याएर छोडे । पसिनाले निथ्रुक्क भएको ज्यान लिएर चुलोकै छेउमा बसेँ म । ओदानसरि गाडिएर । साहुनी निमा लामा कोक्रोमा बच्चा लिएर पाउनाहरूका लागि खाना बनाउन लागिन् । तीन छोरीकी आमा । बिहान ६ बजेदेखि लगातार काममा छु भन्थिन् । आठ बज्दा फेरि अर्को लट पाहुना । उनले मलाई हेर्दै भनिन्, ‘रक्सी पार्नु बाँकी छ । साथी बसिदिनुस् है । थकाइले निद्रा आइसक्यो । एक्लै भए निदाउन थाल्छु ।’ बाटो बन्ला, बाटैमा घर बनाम्ला र अझै राम्रो होटल थापम्ला ! सपना उनको यही थियो । जेठी छोरीलाई हिलेमा बोर्डस राखेर पढाएका छन् । भनिन्, ‘भोटेको जातले पहिला पढेन । धेरै दुःख पायो । अब छोरीहरूलाई पढाउने ।’ यसैका लागि बगेको थियो उनको निधारमा पसिना, त्यो चिसोमा पनि ।
थेन्डुक र म बिहानै बाटो लाग्यौं । रोटी र चटनी खाजा बोकेर । दिनभरि हिँडेर किमाथांका नपुगी केही मिल्नेवाला छैन खानेकुरा । ओसिएको मौसम । पानीका छिटा । चिसोले गलेको मेरो ज्यान । हिँड्नै मानेन । लेकको उकालो सुरु हुनै लाग्दा मैले हापें यात्रा । थेन्डुक मलिन अनुहार लगाएर एक्लै बाटो लाग्यो । गाउँ फर्किएँ । गाउँकै नामी तेम्बा सरकहाँ पुगें । बातैबातमा मलाई हिम्मत नहार्न सुझाए तेम्बा सरले । किमाथांका महोत्सव गर्ने योजनामा लागिपरेका थिए उनी । भोटखोलाको हालखबर पुगे हुन्थ्यो देशैभरि, यही चाहन्थे । साँझ गाउँपालिका प्रमुख तेम्वा भोटेकहाँ पुर्‍याए । दुवैको नाम तेम्बा । मीतज्यूहरूका बीचमा बसी भोटखोला विवरण टिप्न थालें मैले । बिजुली आयो । बाटो बन्दै छ । खानेपानी पनि छ । वडावडामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य एकाइ राख्ने धुनमा छन् दुई मीतज्यू । सञ्चारको सुविधा छैन । भोटखोला गाउँपालिकामा ५६ वटा गाउँ छन् । यति गाउँमा २३ विद्यालय छन् । छोरीहरू स्कुल जाने क्रम बढेको छ । अँध्यारो मुक्त हुने क्रममा छ । मोटर नपुगेकाले हो कि पर्यटनको चमक भने देखिँदैन ।
‘चाइनासँग बाटो जोडेपछि उताको सामान ओसार्ने मात्रै कि यताबाट पनि उता पठाउने ? कुनै बेलाको तिब्बत–नेपाल व्यापारको चमक यो राजमार्गले फर्काउला त ?’ प्रश्न सोझ्याएँ मैले । प्रमुख बोले, ‘अलैँची र कोदोको पकेट एरिया । तरकारी पनि राम्रो फल्छ । चाइनाको खानेकुरा र तरकारीको स्वादै गतिलो छैन । हामीले उनीहरूको बजारमा पठाउने धेरै कुरा हुन सक्छ ।’ जडीबुटी छन् निकैथरीका । नामी छ, भोटे लसुन । कृषिमा क्रान्ति गरेर चाइना–नेपाल व्यापारको हब बनाउने सुनौलो सपना कापीमा लेखेर देखाए गाउँपालिका प्रमुखले ।
एक जना तेम्बाको उपनाम प्रमुख । अर्का तेम्बा सर । अब तेम्बा सर जोसिएर बोले, ‘केही नहुनेले सिस्नोको पात भए पनि बेचौंला भनेर बसेको छ । बाटो मात्र बनोस् न ।’ कसैको ठूला–ठूला योजना हत्याउने दाउ ! कसैको ठूलै होटल व्यवसाय चलाउने ! तेम्बा सर पनि सानदार होटल व्यबसायको दाउ बुनेर बसेका छन् । आफ्नो हैसियतअनुसारको दाउ मुठीमा थुनेका छन् मानिसहरूले । ‘मनाङ र मुस्ताङका शेर्पाजस्तो भोटखोलाको भोटेले हाँक्ला त उन्नति ?’ प्रमुखले राजनीतिक जवाफ दिँदै थिए । तेम्बा सरले थपे, ‘यताको भोटेहरूलाई उता लानुपर्छ । देखाउनु–बुझाउनुपर्छ । एक्सपोजर भिजिट भन्छ नि ।’ उनले अंग्रेजीमा जवाफ दिए । गाउँपालिका प्रमुख बोले, ‘चाइनाका राष्ट्रपति आए । नेपाल–चाइनाको धेरै ठाउँको नाकाको कुरा पनि भयो । किमाथांकाको कोही नामै लिँदैन । चाइनासँग नाता–साइनो जोडिएको, सम्धीज्यू, सोल्टीज्यू भएको नाका ! सबैभन्दा छोटो र छरितो नाका पो त ।’ कान्ला कान्लामा, पाखापाखामा चाइनालाई बेच्न सक्ने खजाना लुकाएर बसेको छ भोटखोला, भन्छन् मान्छेहरू ।
बिहानै उठें । बाटोको नक्सा लिएँ । लेक हापें । गाउँको बाटो चल्दिएँ । सिमसिम गर्दै थियो मौसम । हुंगुंङ गाउँबाट अब चेपुवा पुग्नु छ । कैले खोंच कैले उकालो हिँड्दै थिएँ । चौतारीमा भेटिए, दुई कलिला भरिया । अब उनीहरू साथी बने । फेरि अर्को चौतारो आयो । बिसायौं । परबाट दुई मान्छे आए । मलाई नियालेर हेरे । खबर टिप्न हिँडेकी केटी भनेपछि, गाउँको खबर बताउन तयार भए । नोर्चे भोटे आफैँ अघि सरे । उनी चेपुवा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख । के गर्ला त बाटोले उनको क्षेत्रमा योगदान ? उनले बताए, ‘स्वास्थ्य उपकरण ओसार्न गाह्रो छ । औषधिसमेत बोकी ल्याउन झमेला छ । गम्भीर बिरामीलाई हेलीले नै ओसार्नुपर्नेछ । यति महँगो सुविधा गरिबको पहुँचमा छैन । सदरमुकाम धाउने उपचार यतै गर्न पाइन्थ्यो । बाटो भए कमसेकम चन्दा उठाएरै भए पनि बिरामीलाई परको अस्पतालमा पुर्‍याउन पाइन्थ्यो ।’ केहीबेर कुरा गरे । ‘स्वास्थ्य बिग्रेजस्तो छ, ख्याल राख्नू है’ भन्दै बिदा भए ।
अब फेरि दुई भरिया गोरे र भुवन बाँकी रहे । उनीहरू अरुण खोलाको किनारमा साहुको अलैँची टिप्न हिँडेका । रमाइलो फाँट आयो । परपर कुहिरो उड्यो पहाडमा । वरिपरि कोदो झुलेको थियो । बीचमा चुटुक्कको बाटो लुकेको थियो । हामीले बिसायौं । एकै छिन सँगै बस्यौं । खाजा बाँडेर खायौं । भुवनले बिरह पाख्यो, ‘मलेसिया गएको थिएँ । साह्रै कष्ट भयो । आमासँग निकै बेर फोनमा रोएँ । अनि एक दिन देश फर्किएँ ।’ यति भनिसक्दा मौसमजस्तै ओसिलो भयो ऊ । ‘अनि अब ?’ मैले सोधें । ‘दिदी धन पो छैन, मन त छ नि । बाटो बनेपछि जिप चलाउन पनि सक्छु । त्यति गर्न पाए बिहा गर्थें । बूढीले होटल थाप्थिहोला ।’ सपना बताएर लजाउँदै मुस्कुरायो २२ वर्षे तन्नेरी ।
दोबाटो आयो । हामीलाई छुटायो । उनीहरूले दिएको चाइनिज बिस्किट मैले झोलामा हालेँ, मायाको बासनासहित । निकै बेर एक्लै हिँडें । उकालोमा स्याँ–स्याँ गर्दै थिएँ । पछाडिबाट कोही आयो नजिकै । उसको र मेरो पुग्नुपर्ने ठाउँ एउटै– च्याम्टाङ गाउँ । बीचको चेपुवा हुँदै लिंगम गाउँ पुगियो । यसलाई मानिसहरू भोटखोलाको सानो काठमाडौं भन्दा रहेछन् । उपत्यकामा लुपुक्क परेर बसेको सुन्दर गाउँ । झरीको लुकामारीमा परपर उडेको कुहिरोले झनै सुन्दर पारेको ।
एउटा होटलमा एक हूल कामदार तोंग्वा तान्दै थिए । एक छिन बिसाएपछि म उनीहरूको मन भर्न थालें । समूहका एक किटोक भोटेले भने, ‘बाटो बने त के मा पो फाइदा नहोला र हाउ ! जिन्दगी नै बदलिएला नि ! हाम्रो कामको सामान ओसार्न सजिलो होला । पैसा जोगिएला । हजार रुपैयाँ बोराको सिमेन्टलाई ६ हजार तिर्नुपर्छ । उता १५ सय बोरा पर्ने जिरा मसिनो चामल यता ६ हजार पर्छ । कमाएको पैसा पनि खानपानमै सकिन्छ ।’ धरान र काठमाडौंकै धनी मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको थियो, उनीहरूको सानो कमाइले । हिँड्नै लाग्दा एक प्रौढले हातै जोडेर भने, ‘बाटो कुरा पुर्‍याइदिनू बिन्ती ।’
च्याम्टाङ पुग्दा रातै पर्‍यो । भोलिपल्ट झरी बिसायो । सूर्य उदायो । अलमल सकिएन । साथी भेटिएन । यही गाउँमा आएर रोकिएको थियो बाटो । च्याम्टाङ गाउँदेखि छुम्सुर गाउँसम्म तन्किएको भीर जिंग्रिङ्ग उभिएको थियो, सांग्व्वा भीर । सेनाले भीर फुटाउँदै छ । सेनाको घर बन्दै छ । कामदार र ठेकेदारको कुरा नमिलेर काम रोकिएको छ । नेताहरूले मुल सडक आ–आफ्नै दैलोमा पुर्‍याउने प्रपञ्च रचेकाले कामले गति लिन सकेको छैन । दिक्क छन् गाउँले । अममलकै बीच दुई भलाद्मी मानिसलाई बाटोमा भेटें । शिक्षक रहेछन् जेवा भोटे । बाटोसम्म छोड्न आए । भीरको भूगोल बताए । बिस्तारै जानुस् छुम्सुर पुग्न सक्नुहुन्छ भनरे आँट भरिदिए । पकेटको स्काई फोन निकालेर दिए । भेट हुन नपाउँदै यो कस्तो बिश्वास ! जय होस् जेवा सर ।
तल कतै सुसाइरहेको अरुण नदीको आवाज, सरकसरक हुने सुकेका पातहरूको संगीत । सबै सुन्दै भीरको बाटो हिँडे, बिस्तारै बिस्तारै । डरमर्दो बाटोमा स्थानीयहरू खुकुरी भिरेर हिँड्छन् । म त यसै पुगें, छुम्सुर गाउँ । साँझमा गोरु खेद्दै गरेका मानिसको पछि लागेर उनकै घर गए । आगोको छेउमा बसें, उही ओदानी पोजमा । यही घरमा अरू दुई मानिस पाहुना रहेछन्, किमाथांका जान हिँडेका । अजिंगरको आहारा दैवले जुराएन त !
छुम्सुरदेखि किमाथांका पुग्ने बाटोलाई गाउँलेहरू बाँदर पनि नहिँड्ने बाटो भन्दा रहेछन् । कतिपय ठाउँमा आफ्नै जुत्ताले टेकेर बाटो बनाउँदै पनि हिँडे । भीर, पहिरोको के कुरा ! ब्यागप्याकसहित उल्टो झुन्डिएर, बाँसको जरा समात्दै पनि हिँडे । उकालो सकिएपछि रोड खनेको बाटो भेटियो । चाइना छुने रोड । यही बाटोले डोर्‍याएर किमाथांका पुर्‍यायो, साँझमा टुप्लुक्क । भिरालोमा फिँजारिएर बसेको किमाथांका गाउँ । ढुंगाका घरहरू, रंगीचंगी टिनका छाना । बार्दलीमा फूलहरू । पारि सुसाएको अरुण, अनि चाइनाको चाँगा बजार । आहा ! मलाई चेपुवा गाउँमा कसैले भनेको सम्झें, ‘यो नानीको ज्यान त हिँड्न सक्दैन रैछ, हिम्मत त माने हो ।’ ज्यानभन्दा अघिअघि मन हिँडेर आइपुगें । एउटा होटलमा छिरेर आगो ताप्दै थिएँ, हुंगुंङबाट छुट्टिएको थेन्डुक टुप्लुक्क छिर्‍यो ।
दिदी ! भन्दै नजिकै आयो, ‘तपाईं फर्किदैन भन्ने मलाई थाहा थियो । स्याउला लिन जाँदा डाँडाबाट हेरिबस्थें, दिदी कैले आउला भनेर !’ उसको मायाले मेरो त आँतै भरियो ।
होटलकी ८० वर्षे सिदर भोटे, चाइनाकी छोरी नेपालमा बिहे गरी आएकी । पारि चाइनाको मान्छेसँग यताको दोहोरी चल्छ रे ! पारिकाले भन्छन् रे, ‘तिमीहरू राजा नभएको, टुहुरोहरूजस्तो छ, विकास पनि छैन ।’ यताकाले फर्काउँछन् रे, ‘खान–लाउन पाएर मात्र के भयो, तिम्रो देशको हाकिमले भेडा–बाख्राजस्तो थुन्छ ।’ यति सुनाएर उनले भनिन्, ‘मो चाइनाको भए पनि नेपालकै पक्ष लिन्छा ।’ नेपालको सरकार कमजोर भयो । माइतीको अघि लाज भयो । ८० बर्ष भए पनि उनको मनमा एउटा ईख बाँकी छ, किमाथांकाबाट मोटर चढेर खाँदबारी पुग्ने । आफ्नै देशको अस्पतालमा उपचार गराउने । खाँदबारीसँग जोडिनु नै एउटा सपना थियो ।
भोलिपल्ट टहल्दै गर्दा स्थानीय दोर्चे भोटेले पारिको गाउँ देखाए । ठ्याक्क पल्लोपट्टिको पाखामा सानदार भवन थियो । ‘चाइनाको डेन्डाङ् नगरपालिका कार्यालय । लिफ्ट पनि छ । उनीहरूको लिफ्ट हाम्रो लिस्नो,’ यति भनेर उनी मज्जाले हाँसे । कस्तो लाग्ला त पारिको विकास हेरी वारि बस्नु ? मुख छोपेर उनले भने, ‘लाज लाग्छा ।’ बात मारिसकेर म गाउँको पाखातिर झरें । एक जना मानिस चौंरी जोत्दै थिए । म नजिक गएर कुरा गर्न खोजेको, उनले पो स्वाट्ट गोजीबाट स्मार्ट फोन निकालेर मेरै अन्तर्वार्ता लिए, ‘यो किमाथांका पाँच वर्षमा कहाँ पुग्छ भन त ?’ उनी वडासदस्य दमाई नावा रहेछन् ।
अर्को दिन होटलकी पेम्बा दिदीसँग भोटे लुगामा मेला भर्न हिँडेँ । चौंरी जोत्दै थिए केटामान्छेहरू । उवा छर्दै थिए महिलाहरू । पर्म लाउने परम्परा जीवितै थियो । ‘हामी चौंरी जोत्दै छ, पारितिर ट्र्याक्टर,’ एउटाले रेला गरे । सबै हाँसे । मेला भरे, भुटेको गहुँ र जाँडको नास्ता खाए । पारिको सरकारले घर बनाइदिनेदेखि बच्चा पढाइदिनेसम्म सबैथोक गर्छ । यता बाटोसम्म छैन । ‘चाइनातिर ठूला–ठूला घर भए के भो त, हाम्रोजस्तो खान लाउन जान्दैना । ट्वाइलेटमा आची बस्न जान्दैना,’ कोदालो बिसाउँदै पेम्बाले थपिन् । हाँसोले मेला रन्कियो ।
नेपाल सरकारको आँखाबाट कहाँ हो कहाँ छ– किमाथांका । यताका मानिसको मिहिनेत देखेर चाइनाको सरकार नै खुसी भएको छ । चाइनाले आफ्ना अल्छी जनताको सुविधा नै काटिदिएछ एक वर्ष । र, भनेछ– नेपालको मान्छेबाट सिक । एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा प्राकृतिक जीवनशैली हस्तान्तरण भएको छ । औषधि उपचारदेखि रम्ने–रमाउने उनीहरूको आफ्नै विधि र नीति छन् । बजारको हावा नलागेको भोटखोलाको जीवन प्रकृतिसँगै टाँसिएर बाँचेको छ । कान्ला–कान्लामा दुःख उभिएको छ । उनीहरू हाँस्न र रेला हान्न छोड्दैनन् । रमाएरै दुःख जितेका छन् ।
अर्को दिन किमाथांका प्रहरीले मलाई पारि चाइना घुमायो । नदीमा लगातार डोजरको आवाज झर्कोलाग्दो थियो । प्रकृतिको दोहन गरी बिल्डिङ मात्रै उभ्याउनु विकास हो भनी किमाथांकाले नसिकोस् । बाटो आउनुपर्छ भन्नेमा अडिग भए पनि यसले ल्याउने विनाशसँग हाम्रा मानिसहरू सतर्क भने थिए । बाटैभरि चाइनाको चाउचाउको खोल र मानिसहरूको पाइतालामा चाइनिज जुत्ता देखियो । नेपाली चाउचाउ र जुत्ता किन नपुगेको होला यो भेगमा ! मनमा खल्लो लाग्दै थियो । यत्तिकैमा एक जना मानिसले बडेमानको भाँडोमा जाँड बोकेर पारि चाइना लैजाँदै गरेको देखें । उनले भने, ‘नेपालको कोदो र जाँड भनेपछि चाइनाका मानिस हुरुक्क गर्छा ।’ सन्तोष लाग्यो । सँगै हिँड्दै गरेकी २३ वर्षे पासाङले भनी, ‘तल गोलासम्म बाटो आाउँदा त हामीलाई राहत भएको छ । यहीँसम्म आइदिए त यिनीहरूको हेपाइ कम हुने थियो । कम्ती महँगो छ र !’ जो–जोसँग कुरा गरेँ, सबैको भाव एकै थियो । अर्काको दरबार हुनु र आफ्नो घर हुनु फरक छ । अर्को देशमा भर पर्न मनले मानेको छैन ।
पारिबाट फर्केर आउँदा होटलभरि एक हूल युवा थिए, तोंग्वा तान्दै गरेका । उनीहरू पारि चाइनाबाट फर्केका रे ! राति चाइना–नेपाल गेट च्यातेछन् । ज्यानको माया मारेर खोला किनारै–किनार चाइना पुगेछन् । लेबर काम गरे । पैसा कहीं पाएनन् । कतै हिउँमा टिक्न सकेनन् । सबै छोडेर उनीहरू फर्के । चाइनाको सय, नेपाली सोह्र सय । यही लोभमा काम गर्न जाने मानिसको लर्को दिनकै भेटिन्छ । वैधानिक रूपमा रोजगारमा जाने कुनै सरकारी योजना छैन । केही परे जिम्मा लिने कोही छैन । मेक्सिकोबाट भागेर अमेरिका जानेहरूको जस्तै हाल रहेछ किमाथांकामा ।
अर्को दिन लेक पार गर्दै, फेरि ओरालो झर्दै १२ घण्टामा हुंगुंङ गाउँ फर्किएँ । राति दुर्घटनामा परें । खुट्टा अशक्त भयो । पाँच दिन थलिएर बसें । दुःख हेरेर पुग्दैन, भोग आफैं, भनेझैं लाग्यो प्रकृतिले । प्रदेश नम्बर एकका योजना प्रमुख र स्थानीय सरकारको पहलमा ट्र्याक्टर जोहो भयो । पाँचौँ दिनमा घिस्रिएर ट्र्याक्टरतिर लाग्दै थिएँ । किमाथांकामा भेटिएकी पासाङ नै मलाई डोर्‍याउँदै थिई, ‘दिदी यता त यस्तै हो, उपचार गर्न लिएर गएको मानिसलाई सेलाएर आउने हो । हेली बोलाए पनि आाउँदाआउँदै मान्छे मरिसक्छ । मेरो बा पनि त्यसैगरी बित्यो ।’
बरुण उकालो लागेपछि भोटखोलालाई निषेधित क्षेत्र मानिएको छ । हेलिकोप्टरले पनि अनेक प्रक्रिया छिचोलेर आउनुपर्छ । म ट्र्याक्टर चढें । ऊ बिदा भई । विकराल छ बाटो । दसघण्टे ट्र्याक्टर यात्रामा चालक सुनील गुरुङले भने, ‘दुर्घटनाको कुरा भइरहन्छ । तर, डराएर के गर्ने दिदी, कर्मले जहाँसम्म पुर्‍याउला त्यहीँसम्म जाउँला । तापाईं पनि कर्मकै कारण यो हालतमा ट्र्याक्टरमा हिँडेको छ ।’ कहिले बन्ला नि बाटो !
भोटखोलाका स्थानीय नागरिक सुक्खा बन्दरगाहका लागि जमिन दिन तयार छन् । चाइना अघि सर्न तयार छ, बाटो बनाउन । काठमाडौंको सरकारसँग बलियो गरी बोल्न अरुण नदीपट्टिका मानिसको पहुँच कमजोर छ । नाका महोत्सव गर्न लागिपरेका स्थानीय अगुवा तेम्बा नावा काठमाडौंमा भेटिए । उनीलगायतको टिम लगातार प्रयत्नमा छ । तर, काठमाडौंलाई यो कुरा सुनाउन हम्मे–हम्मे परेको छ । राष्ट्रपतिसँग भेट ढोकैमा पुगेर रोकिएको सम्झेर उनी खिन्न भए । भने, ‘सरकारले किमाथांकालाई नेपालको एपेन्डिक्स मान्छ होला ।’ तमोर नदीपट्टिका मानिस राजाका पालामा मन्त्री थिए । दुई–तिहाइको सरकारमा मन्त्री छन् । अरुण हाँगोका मानिसको आवाज काठमाडौं आउन नपाउँदै बिलाउँछ । ल्हासाबाट सबैभन्दा छोटो नेपाल जोड्ने नाका यही हो । नेपाल र नेपालीको आर्थिक व्यापारको सम्भावना बढाउने नाका यही हो । यही छायामा छ । पुतलीको लार्भाजस्तै लुकेर बसेको उत्साहको पोको फुकाउन आतुर छन्, मानिसहरू । यस्तो सामरिक महत्त्वको नाका कहिले खुल्छ होला ! भोटखोलाले पर्खिरहेछ ।
प्रकाशित : पुस १२, २०७६ १०:५०
आश्विन २५, २०७६ सरला गौतम
आज रावण मुडमा छन् । साथमा उनका प्रिय अनुज कुम्भकर्ण छन् । आफ्नो सानदार लाइब्रेरीमा बसेर रावण पुस्तकका पानाहरू पल्टाइरहेछन् । रावणकोजस्तो पुस्तकालय सिंगो भारतमै छैन । अझै मीठो कुरा त के भने रावणले यो सबै पुस्तक सिनित्तै पारिसके । मखलेल कुम्भकर्ण दाजुलाई हेर्छन् । झनै मख्ख पर्छन् ।
को होला यो तीन लोकमा उनको दाजु रावणभन्दा तेजस्वी, सुरवीर र बुद्धिमान् ? भाइको मनमा फूलेको मुस्कानको सौन्दर्य रावणको मुहारमा दौडिन्छ । रावणले छाती तन्काएर सोध्छन् कुम्भकर्णलाई ‘कविता सुन्ने कुम्भ ?’ आश्चर्यले आँ भएको अनुहार दाजुतिर दौडाउँछन् कुम्भकर्ण, ‘दाइले कविता पनि लेख्नुहुन्छ ?’ रावणले सुरु गर्छन् कविता वाचन ।
रावण कवितामा हराउँदै जान्छन् । उनको कवितामा सूर्यका किरणहरूले धर्तीमा पाइला राख्छन् । बादलहरू पहाडमा ठोकिएका छन् । कुम्भकर्णको मगजको फ्युज उड्छ । सूर्य र धर्तीको कथामा यो बादल र पहाड कहाँबाट आए हँ ? छक्क परेको कुम्भको अनुहारलाई रावणले घुरेर हेर्छन् । बिचरो बालक कुम्भकर्ण ! फेरि एकचित्त भएर सुन्न थाल्छन् । रावणले पनि कसलाई सुनाउन जाउन् ! उनको भन्नु केवल एक कुम्भकर्ण त हो । यही बालक जो आफ्नो दाजुलाई तीन लोककै हिरो ठान्छन् । रावणले कुम्भलाई पितृस्नेह भुलाइदिएका छन् । भातृप्रेमका सारा कथा बिर्साइदिएका छन् । अब उनको कविता नसुनेर भयो त । किशोर रावणलाई हावाको हर झोक्काले एक सर्को मात दिएर जान थालेको छ । उनको दिलले पिरतीको फूल फुलाउन थालेको छ । बालक कुम्भकर्णले उनको भावनाका सबै छालहरू थामिदिनु परेको छ । संसारले उनीहरूलाई नागा भन्छ । यी दुई नागाका तीनै लोकमा आफ्नो भन्नु कोही छैन । आफ्नै बाबुबाट रिजेक्सनमा परेका छन् ।
ओहो यति राम्रो पनि कविता हुन सक्छ त । साक्षात विष्णु र महादेवले लेख्न सक्दैनन् होला दाजु ।’ रावणको कविता सुनेर कुम्भकर्ण प्रतिक्रिया दिन्छन् । भीमकाय शरीरमा लामा–लामा जुंगाको ताउ लाउँदै सबैको सातो खाने रावणले कविता सुनाइरहँदा मलाई पनि स्वाद लागेको छ । लेखक अमिशको ‘रावण’ नामको पुस्तकको नब्बेऔं पेजमा छु म । कथाको सुरुतिर फर्कौं अब । ऋषि पिताका राक्षस पुत्र । पिताको आँखाको कसिंगर । पत्नी कैकेसीसँगको सम्बन्ध र छोरा रावणको बारेमा दुनियाँलाई थाहा दिन्नन् ऋषि । उनका लागि सरमको बात छ । विणावादन प्रतियोगितामा छोरा रावणको झेली थाहा पाएपछि पिता भिसर्व रिसले आगो भएका हुन्छन् । बाघले सिकार झम्टेसरि बालक छोरामाथि जाइलाग्छन् । पिताको हृदयमा आफ्ना लागि भन्दा उनको चेलाको लागि बढी प्रेम देख्छन् रावणले । अपमान र तिरस्कार । त्यही घाउमा पिटाइको पुरस्कार । सिसाझैं टुट्यो रावणको मन । तर सम्हालियो बालक रावण । खायो कसम । तीन लोकमै कसैले छुन नसक्ने खतरा बनेर देखाउने । बाउको नामोनिसान मेटाउने । आफ्नै नामले लोक हल्लाउने ।
आमा कैकसीको पेट ठूलो हुँदै गएपछि बालक रावणको खुसी पनि बढ्दै जान्छ । खुब ख्याल राख्छन् आफ्नी आमाको । आमाको पेटमा उनको साथी खेलिरहेको बखत रावणका बाबु भने बेपत्ता हुन्छन् । बालक रावण आफ्ना मामासँग व्यथाले च्यापेकी आमा कुरेर बस्छन् । दस दिनसम्म अहोरात्र । आश्रम वरिपरि उनीहरूलाई आक्रमण गर्ने मानिसहरूको भीड जम्मा हुन्छ । नागालाई जन्म दिएकी उनकी आमा र भाइलाई सिध्याउन जम्मा भएका मानिसहरूसँग जुध्न बालक रावण स्ट्यान्ड बाई उभिन्छन् । उनका मामाको सहायतामा पूरै परिवार आश्रमबाट भागेर ज्यान जोगाउँछन् ।
आफ्ना पिताले नै नवजात भाइलाई मार्नका लागि मानिसहरू खटाएको कुरा थाहा पाउँदा नौवर्षे बालक रावणको मनमा रिस र पीडाको लाभा उम्लन्छ । जंगलमा विश्राम गरिरहेकी आमासँगबाट भाइलाई काखमा लिएर भन्छन्, ‘मेरो जीवन रहुन्जेल तिमीलाई केही हुन दिने छैन ।’ नौवर्षे बालकको यो क्रिया देखेर उनका आमा र मामा एकअर्कासँग आँखा जुधाउँछन् । हिँड्दाहिँड्दै घनघोर अँध्यारो हुन्छ । जंगलको बीच पुग्छन् सबैजना । भोकाएकी सुत्केरी आमाका लागि रावणले सिकार गर्छन् । जंगली जनावरको आवाज सुनेको भरमा उनले तीर चलाउँछन् । एक झट्कामा सिकार गर्छन् । यो दुर्लभ खुबी देखेर उनको मामाको मुख आश्चर्यले निकै बेर आँ हुन्छ । यो कठोर अप्ठेरोमा पनि रावणलाई मामाको साथ फिलर लाग्छ । मामालाई सहाराको पिलर ठान्दैनन् । आमा र भाइको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र सुरक्षा अब उनले आफ्नो काँधमा थमाइसके ।
दुई नागा भान्जालाई लिएर घर पुगेको रावणको मामालाई उनको घरले स्वीकार गर्दैन । उनीहरू त्यहाँ पनि रिजेक्सनमा पर्छन् । अब जाने कहाँ ? रावणको दिमागमा हल्का बतास चल्छ । उनले आश्रममा भेटेकी कन्याकुमारीको गाउँ सम्झन्छन् । कन्याकुमारीको कुरा मनमै लुकाएर मामालाई भन्छन्, ‘हाम्रो बा पक्कै त्यो गाउँमा हुनुपर्छ । त्यतै जाम ।’ बालकको मनमा कन्याको मोहनी कुदिएको कसलाई के थाहा । सबै त्यतै लाग्छन् । वैद्यनाथमा केही दिन अडिँदा रावणले झुलुक्क कन्याकुमारीको दुर्लभ दर्शन भेट्छन् । मन भरिएकै हुँदैन । मामाले अझै पूर्वतिर कुदाउँछन् ।
उद्यमी र प्रेमी रावण
कहर छिचोल्दै रावण आफ्ना मामा र आमासँग प्रसिद्ध चिलिका लेक पुगे । सप्त सिन्धु देशका व्यापारीहरूको हब । राजाहरूका राजा अयोध्याका दशरथको रजगज चल्ने ठाउँ । सुरुमा मामा र भान्जाले लेकमा सानोतिनो काम पाउँछन् । यसैले गुजारा चलाउँछन् । रावण अैरे गैरे नत्थु खैरे कामदार कहाँ हुन् र ! छिट्टै उनले एउटा डुंगा भाडामा लिएर कारोबार सुरु गर्छन् । उद्यमशीलताको पहिलो पाइला चाल्छन् । बालककालदेखि अध्ययन अनुसन्धानमा माहिर रावणले यो एरियाको एक एक सुराकी गर्छन् । को हो खतरा डन यो एरियाको । उनले पत्ता लगाइहाले । अकम्पना हो डन । रावणको जोखिम बहन गर्न सक्ने खुबी, सामान स्मग्लिङमा उनले देखाएको कौशलताले अकम्पनाको मनमा अनुकम्पाको ढोका खुल्छ । अब रावण अकम्पनाको क्याम्पमा प्रवेश गर्छन् । रावणले अकम्पनाको खुबी र कमजोरीको फेहरिस्त आफ्नो दिमागको नक्सामा उतारिसकेका हुन्छन् ।
उसको घाटामा जाँदै गरेको व्यापार । मर्मत सम्भार नगरी घिसिपिटी चलिरहेको पानीजहाज । व्यापार घाटाको कारण गहिरिएको पारिवारिक कलह । यसैबीच रावण मामासँग अकम्पनाको घर पुग्छन् । तेह्रवर्षे बालक अब सीधासीधा व्यापारिक डिलिङमा उत्रन्छ । अकप्पनाको जहाज, लेकको किनारमा खडा हुन्छ । रावणले त्यतैतिर देखाएर सोझो प्रस्ताव गर्छन् । ‘म यो जहाज भाडामा लिन्छु । मर्मत सम्हार खर्च बेहोर्छु । यसले गर्ने कारोबारको नब्बे र दस भाग लगाऔं ।’ मख्ख भयो अकम्पना । भन्यो, ‘ नब्बे र दस भइहाल्छ नि ।’ रोके रावणले उसलाई बीचैमा ‘दस तिमीलाई, नब्बे मलाई ।’ आफ्ना तेह्रवर्षे भान्जाको सारा अजिब पारासँग वाकिफ मरीच आश्चर्यले हल न चल हुन्छन् । यतिसम्म त उनलाई अपेक्षा नै थिएन । एरियाको नामी डन, जोसँग जागिर मागेर खाएको छ, उसैलाई पार्टनर बनाएर नब्बे असुल्ने ! अनि सुरु हुन्छ चिलिका लेक एरियामा रावणगिरी फुल फेल्ज्डमा ।
उनको जहाजको कारोबार रफ्तारमा जान्छ । पन्ध्रवर्षे रावण अब नामी व्यापारी भइहाल्यो । व्यापारी राजा कुवेरको लंका आउने–जाने त पानी पँधेरो रावणका लागि । रावणले पत्ता लगाए कुवेर उनका ऋषि पिता भिसर्वका चेला हुन् । रावणलाई कुवेरसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु छ । तर उनका बाबुको नाम भजाउनु छैन । रावणले लंकाको गोकर्णमा आफ्नो व्यापारको आधारशिला खडा गरे । त्रिशंकु राजालाई सहयोग गरी समृद्ध लंका बनाउन सहयोग गर्ने गुरु विश्वामित्रको प्रभावको रिसर्च गरे । अब रावणलाई लंकामा जम्नु छ । यति बेलासम्म रावणले लंकाको गोकर्णमा शानदार घर खडा गरिसकेका छन् । विश्वामित्रसँग उनको आफ्नै आत्मनिर्भर सम्बन्ध बनिसकेको छ ।
रावणको अलग च्याम्बर पनि छ । जहाँ छन् पुस्तक, चित्रहरू र बाजाहरू । उनको त्यो आलिसान च्याम्बरमा पस्ने कसको हिम्मत । कुम्भकर्णलाई भने उनी लैजान्छन् । र सुन्दर चित्रहरू देखाउँछन् । थरीथरीको पोजमा कन्याकुमारीको प्रत्यक वर्ष फेरिँदै गएको मुहार र मुद्रामा । कुम्भकर्ण फेरि हेरेको हेर्‍यै हुन्छन् । मखलेल पनि हुन्छन् । आफ्ना दाजुको निजी जीवनको एक मात्र हकदार हुन पाएकोमा । रावणले आफूले बनाएको हाथा कुम्भकर्णलाई देखाउँछन् । कुम्भ सल्लाह दिन्छन्, ‘दादा तपाईंले बनाएको सामानको नाम तपाईंकै नामले चिनिनुपर्छ ।’ दादाको हनुमान कुम्भ । सानो भाइलाई आफ्नो मनको कुरा सुनाउन थाल्छन् रावण । कन्याकुमारिको चित्र हेर्दै कुम्भ सोध्छन्, ‘दादा हरसाल यी केटीले तपाईंका लागि पोज मार्छिन् ? कसरी बने यी चित्रहरू ।’ भाइको नादानीले हैरान हुन्छन् रावण । मुसार्छन् उसको कपाल । र भन्छन्, ‘उनी त कहाँ छन् कहाँ । मैले कल्पनामा कोरेका हुन् यी सबै चित्र ।’ कुम्भले अँगाल्छन् आफ्नो दाजुलाई । ढाडस दिन्छन् ‘दादा कन्याकुमारीलाई भेटाइछाडिन्छ ।’
रावणको दिल प्रेमको रापले रन्केको हुन्छ । दिमाग महत्त्वाकांक्षाको आगोले तातेको हुन्छ । दिल र दिमागको रकेट रफ्तारमा उनको सानो भाइ मायालु सारथि बन्छ । मामा मारीच र पहिलेको मालिक अकम्पना त रावणको सेवक भइसके । अब रावणको टार्गेटमा को त भन्दा लंकाको महासेठ राजा विदुर ।
उनी पुगे गुरु विश्वामित्रको कुटीमा । तीन लोकमै दुर्लभ पुष्पक विमान केवल विदुरसँग छ । सो विमानको असली यन्त्र विश्वामित्र सप्लाई गर्छन् । रावणको तीरभन्दा तेज दिमागले सँगालेर राखेको छ सूचना । रावण सामुन्नेमा उभिएर विश्वामित्रसँग डिल गर्न तम्सेको देखेपछि ऋषि र उनका सहयोगी जिल खाएर फिलिली हुने भइहाले । किन चाहियो रावणलाई पुष्पक विमानलाई चाहिने सामान । कतै विदुरलाई सीधा माल सप्लाई गरेर आफ्नो नाफा चौपट पार्ने त होइन ? विश्वामित्र सशंकित बन्छन् । रावणले आफैं विमान खरिद गर्न लागेको भान दिन्छन् । रावणको असली मक्सद के हो बुझ्न विश्वामित्र रावणलाई एकटक हेर्छन् । रावणले आफ्नो दिमागको ढोकामा ताला लगाइदिन्छन् । कुनै माइकालाल ऋषिमुनिसमेतले उनको दिमाग पढ्न नसक्ने बनाइदिन सक्ने टेक्निक रावणको हुन्छ ।
विश्वामित्रले सो पदार्थको वार्षिक मूल्य पाँच लाख सुनको सिक्काबराबर तोकिदिन्छन् । रावणले एक सटमा कन्ट्र्याक ओके गरिदिन्छन् । विश्वामित्रको यो चलाखी उनलाई पहिल्यै आभास भइसकेको थियो । यो सबै थाहा पाएर रावणको मामा र अकम्पना बेहोस हुन मात्र सक्दैनन् । अझ पुगेन यो सबै असुलउपर गर्न दुई सयवटा पानीजहाज खरिद गरेर तुफानी वेगमा समुद्रमा कुदाउने रावणको प्लान सुनेपछि उनीहरूको होस उड्छ ।
तर पैसा ल्याउने कहाँबाट ? छेउमा बसेर लेमन जुस खाँदै गरेको कुम्भकर्ण दाजुलाई आइडिया दिन थाल्छन् । कुम्भले चिलिकाको गभर्नरको अकूत सम्पत्ति लुट्ने योजना दिँदा मामा मरीचले पिउँदै गरेको पानी धन्नै सड्काएनन् । कालिंगाको राजाको सम्पत्तिबाट घोटाला गरी कर्कचाबहुले दौलत कुम्लाएर जमिनमा पुरेर राखेको सूचना कुम्भले बजारबाट टिपेर ल्याएका हुन्छन् । यति सुनाएर उनले अझै थप्छन्, ‘ठीक छैन त दादा आइडिया । चोरको सम्पत्ति लुट्नुको मजै बेग्लै ।’ भाइलाई मुसार्दै रावणले भने, ‘आखिर भाइ कसको ?’
गभर्नर कर्कचाबहुको सेनापति प्रहास्तलाई कुनै समय रावणले बचाएका हुन्छन् । यही कुरा नै प्रहास्तलाई हातमा लिने कडी बन्छ । प्रहास्त र उनका केही सेना लिएर, चिलिकाको गभर्नरको सम्पत्तिमा लुटपाट मच्चाउँछन् रावणको ग्याङले । दुवैतिरका मानिसहरूको ज्यान पनि जान्छ । रावण कल्पनै नगरेको दौलतको मालिक बन्छन् । अब उनले आफ्नै तालिमप्राप्त सेनाको टुकडी खडा गरे । एक व्यापारीका लागि यो सामान्य होइन । तर रावणका लागि के सामान्य के असामान्य । रावणको शक्तिको तेज लंकामा आगोसरि फैलियो । राजा विदुर वाकिफ नहुने कुरै भएन । रावण अब लंकाको आर्थिक सुरक्षाको प्रधानसेनापति बने ।
रावणले जे–जे हासिल गरे पनि उनको मन खाली छ । खाली ठाउँ भर्ने कन्याकुमारी भेटिएकी छैनन् । बृहत् डाँकागिरीको समयमा कालिंगामा झुलुक्क कन्याकुमारीको दर्शन पाएका हुन्छन् कुम्भले । यही संकेतको आधारमा दाजुको एकोहोरो प्रेम सफल पार्न उनी कन्याकुमारीको खोजीमा जान्छन् । अब त कुम्भकर्णको पनि आफ्नै पानीजहाज छ नि । उनी वैद्यनाथको वरिपरि रहेको कन्याकुमारीको गाउँ भेटाउन जान्छन् । तीन वर्षसम्मको अथक खोज अनुसन्धानपछि पत्ता लगाइछाड्छन् । तीन वर्षसम्म विछोडिएको भाइ प्रेमिकाको खबर लिएर आयो । रावणलाई अब के चाहियो । तर, कुम्भको बोली अड्किन्छ । कन्याकुमारी विवाहित हुन् । उनी त गर्भवती पनि छन् । यो समाचारले रावणको दिलमा गडेको प्रेमको खाँबो हल्लन्न ।
उनी भाइलाई लिएर कन्याकुमारीको गाउँतिर लाग्छन् । रावणले सुख–सयलका कुनै आइटम बाँकी राख्दैनन् । जहाजमा पनि नाच सिकाउने ट्रेनर लिएर हिँड्छन् । आफ्नो निजी च्याम्बरमा भाइलाई डान्सको स्टेप देखाउँछन् । कुम्भको पानी धन्नै सड्केन । उनले भन्छन्, ‘दाजु प्लिज तिमी ननाच । यो नाच देखेर कन्याकुमारी दस माइल पर भाग्नेछिन् । प्रभावित हुने कल्पनै नगर ।’ आफ्नो तेह्रवर्षे कुमार भाइलाई वाइन चखाउनेदेखि पहिलोपटक सुन्दरी कन्याको दर्शन गराउने सबै गर्छन् रावणले । प्रसिद्ध वेश्यालयमा भाइलाई पुर्‍याएर, मागेजति रकम मालिक्नीलाई बुझाउँछन् । लोककै सबैभन्दा सुन्दरी कन्या भाइका लागि प्रबन्ध गरिदिन्छन् । कुमारत्व भंग हुन्छ कुम्भको । काम कुरो सकेपछि कुम्भ सिरियस हुँदै फर्कन्छन् र रावणलाई भन्छन्, ‘दादा म प्रेममा परें ।’ रावण हाँसेर धन्नै मूर्च्छा परेनन् ।
तालतालका तमासासहित उनीहरू कन्याकुमारीको गाउँमा पुग्छन् । भेष बदलेर लो प्रोफाइलमा डुल्छन् । वेदावती नामकी पूर्वकन्याकुमारी गाउँमै सम्मानित छन् । किसानहरूसँगै काम गर्छिन् । सामान्य मानिससँग बिहा गरेकी छन् । उनलाई गर्ने विश्वास र सम्मानले गाउँ नै एकतामा बाँधिएको छ । तीन दिन भइसक्यो रावण वेदावतीले काम गरिरहेको ठाउँमा पुगेर नदेख्ने गरी टोलाउन थालेको । उनका आँखा वेदावतीको मुहारबाट हट्दैन । दाइ एकोहोरो टोलाएको टोलाएै छन् । भाइलाई बोर भइसक्यो । कन्याकुमारीको अघि पुगेर एक शब्द बोल्ने हिम्मत रावणलाई छैन ।
उनी कसैकी गर्भवती श्रीमती हुन् । यो कुराको परवाह रावणलाई छैन । थाहा पाएदेखि मनमा सजाएकी वेदावतीलाई कुनै पनि सुरतमा हासिल गर्नु छ । अनेक योजना बुन्छन् । वेदावतीको श्रीमान्लाई पनि लंका लैजाने, राम्रो जागिर दिने । वेदावतीलाई आफ्नी बनाउन पनि परेन । लंकामा उनलाई हेर्न मात्र पाए पुग्यो रावणलाई । हिम्मत जुटाएर रावण वेदावतीसँग बोल्छन् । उनको घरमा खानाको निम्तो पनि पाउँछन् । निकै कष्ट गरी एक मौका जुर्छ । रावणले गर्भवती वेदावतीको अघि घुँडा टेकेर आफ्नो प्रेम जताउँछन् । उनको साथ पाए सधैंका लागि राम्रो मानिस बन्ने कसम खान्छन् । वेदावती सम्झाउँछिन्, रावण तिमी कहाँ खराब छौ । हेर त तिमीले आफ्नो भाइ, आमा र मामाको कस्तो जिम्मेवारी लियौ । तिमीमा योभन्दा पनि राम्रो हुने तागत छ । यति सम्झाएर वेदावतीले उनीसँगै लंका जान नसक्ने बताउँछिन् । तर पनि हल्लँदैन रावणको प्रेम । वेदावतीको गाउँका लागि आफ्नी प्रेमिकाको हातमा ठूलो रकमको हुन्डी थमाउँछन् । वेदावती नमानेपछि फेरि घुँडा टेकेर बिन्ती गर्छन्, ‘म स्वार्थी हुँ । सबै कुरा आफ्नो नाफाका लागि मात्र गर्छु । अस्ति गाउँलाई गरेको सहयोग पनि तिमीलाई प्रभावित पार्न हो । यो निःस्वार्थ सहयोग पहिलोपटक गरेको छु । समाइदिएर मेरा लागि कृपा गरिदेऊ ।’ वेदावतीले हुन्डी लिएपछि रावणले आफूभित्रको राक्षसी स्वभावको खील निकाल्ने मन हुन्छ ।
रावणको देवत्वले शिर उठाउन मात्र के खोजेको हुन्छ । नियतिले त्यसो हुन दिँदैन । वेदावतीको मुखियाको छोरा नामी चोर हुन्छ । हुन्डीको बारेमा उसले लुकेर सुराकी गर्छ । आफ्ना अपराधी साथीहरूसँग मिलेर वेदावती र उसको श्रीमान्को बीभत्स हत्या गरिदिन्छ । भर्खर सुत्केरी वेदावतीको नाबालक सन्तानलाई जंगलमा फालिदिन्छन् । आफ्नो मुटुभन्दा प्यारो प्रेमिकाको यो हाल गराउने दानव र तमासा हेर्ने गाउँले सबैसँग पागल हुन्छन् रावण । पूरै गाउँलेलाई कत्लेयाम गरिदिन्छन् । वेदावतीको सदगति गरेर लंका फर्कन्छन् ।
तृष्णाको घैलाको पिँध टालिएको हुँदैन, कसैको पनि । रावणको त झन् ह्वाङ थियो । वेदावतीको हत्याले उनलाई झनै विक्षिप्त पार्‍यो । एकपछि अर्को महत्त्वाकांक्षा । सम्पत्ति र शक्तिले अघिअघि दौडिएर जिस्काइरहे । उनी पागलसरि पछिपछि कुदिरहे । अब रावणको निसानामा पर्‍यो अयोध्या राज्य । सम्पत्ति र शक्तिपछि उनलाई अब अयोध्याका विद्वान्हरूबाट सम्मान चाहिएको छ । सजिलै हुनेवाला छैन यो सब । अयोध्याका राजा दशरथसँग निहुँ खोज्न जान्छन् । उनीसँगै गएका विदुर डरले थरथर हुन्छन् । तर रावणलाई के मतलब । उनीसँग आफ्नै सेना छ । राज्यको सेना मिसाउँदा दशरथको सेना हराउन सकिने हिसाबकिताब प्रस्ट छ । अयोध्यासँग युद्ध छेडियो । कुशल योद्धा रावणले हार्ने कुरै भएन ।
जित हासिल भयो तर पुगेन । अब उनको निसानामा लंकाको प्रधानसेनपति पर्‍यो । उसलाई सिध्याए । आर्थिक बिट र सामाजिक सुरक्षा बिट दुवैका प्रमुख रावण भएपछि राजा विदुर एक्लिए । रावणको निसाना हुनुभन्दा पहिला विदुरले राजीनामा दिए । विदुरको पुष्पक विमान त रावणले उहिले खरिद गरिसके । रावण अब संसारकै धनी राजा । तर भरिएन रावणको मन । समय बित्यो । मिथिला राज्यमा स्वयंवरको चर्चा चल्यो । परम सुन्दरी सीतालाई पाउन राजकुमारको ताँती लाग्यो । विष्णुको अवतार रामले सीता भित्र्याए । रावणले जिल खाए । रावणलाई विष्णु अवतार रामभन्दा कम हुनु छैन । हुनु छैन कम महादेवभन्दा पनि ।
कालान्तरमा सीता अपहरणपछि रावणको दशा सुरु भयो । उनको शक्ति र अभिमानको लंका खरानी भयो ।
को नायक को खलनायक ?
ब्राह्मण ऋषि पिताका नागा छोरा हुन् रावण । आफ्नै पिताबाट बहिष्करणमा परेका उनको लागि राजकाज विरासतको बात थिएन । एक एक गरी सबै आफ्नै बलबुतामा हासिल गरे । आफ्नो नागा सन्तानको हत्या गराउने साजिस रच्ने, श्रीमतीलाई बाइपास गर्न सक्ने उनका पिता ऋषि हुन् । परिवारको अन्तसम्म रेखदेख गर्ने रावण खलनायक । ऋषि विश्वामित्रलाई थाहा थियो रावण गलत बाटोमा छन् । तर विश्वामित्रलाई रावणलाई सही बाटोमा ल्याउनु थिएन । उनलाई योग्य खलनायक चाहिएको थियो । किन ? विश्वामित्रको सहायक छक्क पर्छन् । विश्वामित्रले राज खोल्छन् । ऋषि विश्वामित्रकै पालामा विष्णुको नयाँ अवतार खडा गर्नु छ । भगवान् बनाउन केही मिसन त चाहियो । कोही देव हुन् कोही राक्षस त चाहियो । रावणभन्दा काबिल उम्मेदवार को होला । विदुरलाई पुष्पक विमानका लागि सामान बेचेर दौलत जम्मा गर्छन् विश्वामित्र । हेर्दा कुटीको बास छ । ताक अर्कै छ । विष्णुका लागि चाहिने अस्त्र निर्माणका लागि द्रव्यको दरकार छ उनलाई । विश्वामित्र अयोध्या राजकुलका हेड । उनका प्रतिद्वन्द्वी ऋषि बसिष्ठ, मिथिला राजकुलका हेड । एकको लक्ष्य रामलाई विष्णु बनाउने अर्कोको लक्ष्य मिथिलाकी सीतालाई । दुवैका लागि असली खलनायक रावण । सीता हरणको बेला भएको भीषण लडाइँमा रावणले आफ्ना भाइलाई सन्देह व्यक्त गर्छन्, ‘मलाई घरीघरी लाग्छ म कसैका लागि सञ्चालित छु । तर आफूलाई रोक्नै सक्दिनँ ।’ रावण अस्त्र बनेका छन् नायकहरूलाई महानायक बनाउनका लागि । रिमोट लिएर गुफामा बसेकाहरू निश्कलंक छन् ।
कुनै बेला लडाइँको बेला निहत्था नागरिकलाई आक्रमण गर्ने सेनापतिसँग कुम्भकर्ण रिसाएका हुन्छन् । पाप र धर्मबारे दाजुलाई सम्झाउँछन् । भन्छन्, ‘सेनापति बर्खास्त गर दाजु ।’ परिबन्धले जताजता घिसारे पनि पाप र धर्मको हरदम ख्याल गर्छन् कुम्भ । लडाइँमा हिँडिरहेकै बेला रावणले भन्छन्, ‘कुम्भ अब तिमी मलाई छोडिदेऊ । म त पापी स्वार्थी हुँ । तिमी तिम्रो धर्मको बाटो लाग । म त चाहेर पनि फर्कन सक्दिनँ,’ पितातुल्य दाजुलाई कुम्भले स्नेह बर्साएर भन्छन्, ‘दाजु मैले धर्म नै पालन गरिरहेको छु । दाजुलाई साथ दिनु मेरो धर्म हो ।’ लडाइँको बेला घाइते भएर ढलेका कुम्भकर्णलाई रावणले छातीमा टाँसेर रोएको दृश्य मन हल्लाउनेछ । एक प्रसंगमा रावणले भाइलाई भनेका छन्, ‘हेर कुम्भ म स्वार्थी व्यापारी हुँ । जे गर्छु फाइदाका लागि गर्छु । कुनै पनि मानिसलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका लागि प्रयोग गर्छु । म निकै असल हुँ भनेर आफैंलाई ढाँट्ने र मूर्ख हुने काम गर्दिनँ ।’ केवल महान् देखिनका लागि ढोङ गर्नेहरूका लागि रावण खुला किताब हुन् । उनीसँग संगत नगर्न मानिसलाई सुविधा छ । उनी आफैंप्रति इमानदार छन् । दुनियासँग इमानदार छन् ।
अपहरणमा परेकी आफ्नी श्रीमतीको अग्नि परीक्षा लिने राम भगवान् भए । अर्कैसँग बिहा गरेकी र गर्भ बोकेकी आफ्नी प्रेमिकाका लागि जे पनि गर्न तयार रावण राक्षस भए । प्रेमको परिभाषामा रावणले रामलाई हराएका छन् । परिवारको जिम्मेवारीमा रावण कहीं चुकेका छैनन् । रामायणको युद्ध सुपर्णखालाई राम र लक्ष्मणले गरेको अपमानको जमिनमा उभिएको छ । आफ्नी सौतेली बहिनीको अपमानको बदला लिन रावणले सीता अपहरण गर्छन् । सीताको रूपले कायल भए पनि खराब व्यवहार गर्दैनन् । बहिनीको आत्मसम्मानका लागि छेडेको युद्ध, रावणको नजरमा एक गहकिलो पारिवारिक जिम्मेवारी हो । रावण हृदयमा देवत्व पनि थियो । राक्षस पनि थियो । प्रेम र स्नेह र आत्मसम्मानका भोका रावणको हृदयमा ठूलो खाडल थियो । अपमान र तिरस्कारको विषले उनको हृदयको घैला भरिभराउ थियो । त्यही विष छचल्किएर पोखिँदा वरिपरि सबैतिर विष छरियो । विष भर्ने नायकहरूले पनि रावणको खलनायकीको केही हिस्सा त लिनैपर्छ । मिथकमा रावणलाई केवल खलनायकको पगरी भिराइदिँदा अन्याय पो भयो कि ?
हुन त श्रीलंकामा कतिपय ठाउँमा रावणको पूजा हुन्छ । रावणको नाममा पर्यटकीय ठाउँ मात्र होइन, क्याफे र बुकसपसम्म छन् । भारतमा रावण वध उत्सव भइरहँदा श्रीलंकामा रावणको जय उत्सव हुन्छ । आकाशमा बसी सबै तमासा हेर्ने रावणले भन्दा हुन् ‘म नायक कि खलनायक ?’
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७६ १०:११